Apple inowedzera 6 matsva iOS 11 mavhidhiyo kune yayo YouTube chiteshi | IPhone nhau
Apple inowedzera 6 matsva iOS 11 mavhidhiyo kune yayo YouTube chiteshi
Munguva pfupi yapfuura vakomana vanobva kuCupertino vari kushingairira kutsikisa mavhidhiyo pane yavo YouTube chiteshi. Mune ino kesi izvo zvavanotiratidza ndeyoteedzana ye6 mavhidhiyo matsva matinogona kuona iyo hunhu uye zvimwe zveakawanda mukana weinouya iOS 11 inoshanda system pane iyo iPad.
Mune ino kesi uye sekuziva kwedu tese, iyo nyowani yekushandisa system iyo ichiri muchikamu chebeta iOS 11 inoratidzwa yakanangiswa yakanangana neiyo iPad. Ichokwadi kuti zvakawanda zvekuvandudza zvine hukama neiyo iPhone nevamwe, asi muCupertino vakatarisa mukushongedza iyo iPad ine akawanda akakosha maficha maficha kushanda naye uye ikozvino tichaona vamwe vavo mune ino mavhidhiyo akateedzana.
Mavhidhiyo anogona kuoneka chaiko paApple's YouTube chiteshi anotiratidza mamwe emabasa matsva uye yekutanga yatinoona ndeiyi: maitiro ekuti zvimwe zvinhu zviitwe nekukurumidza nekuwandisa. Iyo nyowani yekudhonza basa uye zvimwe:
Vhidhiyo inotevera inotiratidza maitiro tarisa, kusaina uye kutumira gwaro kubva kuIOS nyowani pane iyo iPad nerubatsiro rweApple Penzura:
Imwe vhidhiyo inotiratidza imwe yesarudzo dzinotarisirwa kwazvo Maviri-maoko iPad dhonza uye udonhedze akawanda mafoto:
Vhidhiyo inotevera inotiratidza nzira yekufamba kuburikidza nemafaira ako. Pasina kupokana imwe ye zvinyorwa zvitsva zveIOS 11, iyo Files application uye muvhidhiyo tinoona maitiro ekufambisa kutenderera app nekugadzirisa mafaera edu.
Isu tinoenderera neimwe vhidhiyo yeApple Penzura uye sei Maka kana nyora pamifananidzo neiyi inotonhorera iPad chishongedzo:
Uye pakupedzisira tinowana vhidhiyo iyo inotiratidza imwe yeakakosha kugadzirisa mune ino iOS 11 yeiyo iPad, mikana mitsva yedoko nyowani. Kubva pakuwedzera akawanda mamwe maapplication pane anogona kuve neIOS 10, kudhonza uye kudonhedza app kubva kudoko kusvika kune achangovhurwa mafaera. Pasina kupokana chimwe chekukosha kwakanyanya kwevashandisi vazhinji:
Isu tatoona nekutsanangura dzimwe dzesarudzo idzi pamwe nemikana mu iPhone News, ikozvino Apple inovaratidza muchimiro chevhidhiyo mukati mayo Youtube channel. Tine chokwadi chekuti mamwe acho achakurumidza kuwedzerwa kune chiteshi cheApple Spain.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple inowedzera 6 matsva iOS 11 mavhidhiyo kune yayo YouTube chiteshi
Yerima modhi, "inogara iri pa" modhi kana inofambiswa Simba repamba mune iri iOS 12 pfungwa
Bandai anozivisa kuburitswa kweTekken yeIOS